Sony na-akụ nzọ na nnukwu ụda ụda na CES | Akụkọ akụrụngwa
Ogwe ụda na-aghọ onye ibe okomoko n'ime ime ụlọ anyị, a na-akwụ ha ọnụahịa dị ka telivishọn dị n'etiti ma nyekwa ahụmịhe onye ọrụ obi ọjọọ. Onwe m, enwekwara m ụlọ mmanya na-ada ụda n'ime ime ụlọ m, na n'ezie, site na akara ndị Japan, ebe ọ bụ na a na-egosipụta ogo ọdịyo nke sistemụ ha.
CES 2018 bụ ọnọdụ zuru oke iji gosipụta ọkwa ọhụrụ nke ogwe ụda, yana Sony chọrọ iju gị anya na ụda nke yiri ka ọ na-esi n'uko ụlọ, teknụzụ n'akụkụ anọ niile, ka anyị hụ ihe akụkọ ndị a nwere.
Modelsdị abụọ ahụ rutere CES na Las Vegas bụ HT-Z9F na HT-X900F, ha abụọ na teknụzụ Dolby Atmos, ndị maara ụda Dolby dị elu maara nke ọma. Ọ bụ kpomkwem ọkọlọtọ a na-enye ohere ụda ka ọ pụta na-esote n'uko ụlọ ahụ, mana ọ gaghị abụ naanị njirimara ya, ụda emetụbeghị nke ukwuu. Naanị ha na-eme ihe niile ohere gburugburu ebe nchekwa Atmos kwere nkwa ma na-anapụta.
Modeldị nke mbụ, HT-Z9F bụ nke kachasị ọnụ ma nwee usoro nke ndị isi okwu atọ na woofer, ọnụahịa ga-adị ihe dị ka euro 1.000 na Europe malite n’izu ole na ole sochirinụ. Maka nkwanyekwu okwu, ha ewepụtala HT-X900F na sistemụ 2.1 mara mma, ee, anyị chetara na n'adịghị ka n'oge gara aga, ndị ọkà okwu anaghị egosi n'ụzọ doro anya karịa, yana ọ bụ na ogwe ụda dị ugbu a na-enye nsonaazụ na-adịghị mma na ụdị dị ntakịrị. usoro. Nke a kachasị ọhụrụ, ọnụ ahịa ụda dị ọnụ ala karịa 600 euro na Old Continent. Agbanyeghị, Sony ekpebiela iwepụta usoro dị iche iche nke sinema Sinema, ogwe osisi dị n'etiti na ndị nnata, ị ga-ahụ ihe niile dị n'ụlọ ahịa eletrọniki gị n'ọnwa na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » Sony na-akụ nzọ na nnukwu ụda soundbars na CES